UKatherine Adams ungene endaweni kaBruce Sewell njengolawulo lwe-Apple | Ndisuka mac
UKatherine Adams ungene endaweni kaBruce Sewell kulawulo lwe-Apple
I-Apple iyavala unyaka-mali wayo, kwaye, njengayo nayiphi na inkampani, iyisebenzise ukuze yenze utshintsho kwizikhundla zokuphatha. Ngesi sihlandlo, ujoyina i-Apple umqolo UKatherine Adams etshintsha endaweni yayo UBruce sewell njengaye VUMongameli oMkhulu woMkhence wezoMthetho kunye noKhuseleko lweHlabathi. Ungumfazi wesibini ukujoyina ubunkokheli buka-Apple, emva kokufakwa kuka-Angela Ahrendts njengentloko yeRetail shishini ngo-2014. UAdams uvela kwinkampani iHoneywell, apho athe wakhulisa khona umsebenzi wakhe wobungcali kule minyaka ili-14 idlulileyo. Kukunqongophala okuvela ku-Apple ukufuna ukulingana, nangona uninzi lweenkampani zetekhnoloji, isekude kumanani afanelekileyo.
UBruce Sewell uthathe umhlala phantsi ekupheleni konyaka. Iminyaka esi-8 edlulileyo uye wantywiliselwa kwinkitha yamadabi amancinci nakhulu asemthethweni. Kuye kwafuneka amangalele izigebenga ezinjengeSamsung, iNokia, iHTC okanye i-FBI uqobo. UKatherine Adams, uya kulidla ilifa ifayili yeQualcomm apho iApple ibhaptiziweyo ngeli xesha.
Iindaba zabhengezwa sisiteyitimenti esikhutshwe nguTim Cook ngokwakhe, osikelela uAdams ngomsebenzi wakhe omkhulu kunye namava aqinileyo kumatyala amaninzi asemthethweni kwihlabathi liphela kunye nokukhusela amaxabiso afanayo neApple.
Umphathi omkhulu weApple ubulela uSewell ngomzamo kunye nokuzinikezela kule minyaka ili-8 idlulileyo enceda ukuseka isiseko sokuthetha-thethana eApple. UCook unebhongo ngokusebenza noSewell, ambona njengomhlobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UKatherine Adams ungene endaweni kaBruce Sewell kulawulo lwe-Apple
joeeeeerrrr 😮 kwaye ujongeka njani njengoTim 😮: p
Amanqaku eLizwi PRO, asivumela ukuba sibhale amanqaku kwiMac yethu
Ukufana kweDesktop ye-13 yeMac ngoku iyahambelana ne-APFS kunye ne-HEVC phakathi kwezinye izinto ezintsha